Talooyin aad ku keydin karto bil kasta mobilkaaga kor-u-kaca ah | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Tilmaamaha si aad ugu kaydiso bil kasta dib-u-cusbooneysiinta moobiilkaaga
Encarni Arcoya | | La cusboonaysiiyay 03/03/2021 09:09 | Badbaadinta
In kasta oo xaqiiqda ah in moobiilku yahay mid ka mid ah kharashyada caadiga ah ee qof walba bixiyo, haddana weli waxaa jira qaar badan oo aan saxiixin qandaraas isla markaana haysta mobilo lacag-bixin ah. Kuwani waxay leeyihiin astaamo ay tahay in dib looga soo celsho waqti kasta x, ha la isticmaalo ama ha la isticmaal. Laakiin, Maxaad sameyn kartaa si aad u keydiso bil kasta ku soo celi mobilkaaga?
Haddii aad leedahay mobilo lacag bixin ah oo aad ka fikirayso in waxa ugu fiican ay tahay inaad u beddesho qandaraas maxaa yeelay wax badan ayaad isticmaaleysaa, laga yaabee tilmaamahan inaad bil kasta ku keydiso dib u buuxinta mobiilkaaga ayaa kaa caawin doona inaad yareyso kharashkaas isla markaana, inaan lala xiriirin shirkad taleefan.
1 Waa maxay moobayl horay loo sii siiyay
2 Sida dib loogu shubo mobilada lacag-bixinta ah
3 Tilmaamaha ku saabsan badbaadinta dib u cusboonaysiinta moobilkaaga
3.1 U yeer inay ku soo wacaan
3.2 Adeegso barnaamijyadooda si aad u soo wacdid
3.3 Kaliya dib u buuxi waxaad u baahan tahay
Waa maxay moobayl horay loo sii siiyay
Dhowr sano ka hor, waxay ahayd wax caadi ah in la helo taleefanka gacanta ee lacag-bixinta ah, taas oo ah, kaarka SIM-ka oo ay leedahay shirkad taleefan laakiin aan qandaraas la saxiixin shirkaddaas. Sidan oo kale, waad wakhti la qaadan kartaa iyaga oo, mar haddii baaqiga taleefanka uu dhammaado, mid kale la samee shirkad kale.
Si kastaba ha noqotee, inyar inyar ayaan "ku lifaaqnay" lambarka taleefanka. Tanina waxay sababtay in isbeddellada isdaba jooga ah ee shirkadaha, iyo sidoo kale "illowga" ee waqtiga dib loogu soo celinayo mobilkaaga, ay ku dhammaadeen luminta lambarradaas. Sababtaas awgeed, tirada qandaraasyada mobilada ayaa bilaabay inay kordhaan.
Maanta dad aad u tiro yar ayaa haysta mobilada lacag-bixinta ah Sababtoo ah waa inaad ka feejignaataa had iyo jeer inaad leedahay dheelitir si aad awood ugu yeelatid inaad u dirto SMS oo aad wicitaano u sameyso, intaas waxaa u sii dheer inaad dib u buuxiso dhowrkii biloodba mar (haddii dheelitirka uusan horay u dhammaan).
Sida dib loogu shubo mobilada lacag-bixinta ah
Caadi ahaan shirkadda taleefanku waxay dejisaa wakhti cayiman oo ay tahay inaad dib u buuxiso. Tusaale ahaan, ka fikir in Janaayo aad dib u buuxiso. Muddada ay dheelitirkaani shaqeyn doono waxay noqon kartaa 4 illaa 6 bilood, si bisha Maajo aad ugu adeegsan karto mobilkaaga dib-u-soo-celintaas.
Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo Maajo, si aad u sii wadato adeegsiga mobilkaaga (waxaan ka hadlaynaa wicitaanno, SMS ...) waa inaad dib u soo buuxisaa, iyadoon loo eegin inaad isticmaashay dheelitirkaagii aad haysatay iyo in kale. Hadda, haddii aad dib u buuxisay inta u dhexeysa bilaha Janaayo ilaa May, muddada ayaa loo kordhiyay dib-u-cusboonaysiin kasta oo cusub. Tusaalahan ka dib, haddii aad dib u soo ceshatay Febraayo, waqtiga kama dambaysta ah ee dib-u-cusboonaysiinta cusub waxay noqonaysaa Juun. Iyo haddii aad dib u soo rogtay bishii Maarso, markaa waxay aadi doontaa Luulyo.
Dib u soo celinta ayaa sidoo kale aad u kala duwan iyadoo kuxiran shirkadda taleefanka halka aad joogto. Waxaa jira qaar kuu oggolaanaya inaad dib u soo celiso hal euro oo keliya, halka kuwa kalena u baahan yihiin dib u soo celinno dhan 5 ama 10 euro oo ugu yar.
Tilmaamaha ku saabsan badbaadinta dib u cusboonaysiinta moobilkaaga
Waqtigan xaadirka ah, mobilada lacag bixinta ah waxay ikhtiyaar fiican u noqon kartaa dadka aan sida badan u isticmaalin laakiin u baahan inay yeeshaan taleefan meesha lagala xiriiri karo (isla mar ahaantaana ay soo wici karaan haddii ay u baahdaan). Astaanta qofka leh mobilo lacag-bixin ah badanaa:
Dadka si dhib yar u isticmaala taleefanka gacanta oo aan ka ahayn inay si teel-teel ah u soo wacaan.
Dadka in ka badan wicitaan, waxa ay qabtaan waa la helaa wicitaano. Qaabkaas, maahan inay lacag bixiyaan si ay u heystaan ​​lambarka taleefanka (oo ka badan inta ugu yar ee lagu dallaco bil kasta).
Kuwa aan inta badan marin internetka (maaddaama inta badan riwaayadaha internetka aan la bixin). Taas macnaheedu maaha inaan la saari karin, kaliya waxay leeyihiin xoogaa lacag dheeraad ah.
Dhibaatada imaan karta ayaa ah, waqtiga oo laga gudbo, waxaad arkeysaa inaad bixinayso bilba bil bil ka badan lacagta hordhaca ah waxaadna ka fikireysaa inaad u wareegto qandaraas laakiin, Sidee ku saabsan codsashada tilmaamahan si aad ugu keydiso dib-u-cusbooneysiinta moobiilkaaga?
U yeer inay ku soo wacaan
Intaad wicitaanada naftaada sameyn lahayd, maxaad dadka kale uga yeleysaa inay ku soo wacaan? Waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan oo lagu kaydin karo. Iyo haa, waxaa laguu tixgelin karaa inuu yahay qof aan la isku halleyn karin maaddaama inta badan aadan wicin, laakiin isku day wax walba ku xalliyaan habab kale oo taleefanka uga tagaya ikhtiyaarka ugu dambeeya.
Tusaale ahaan, waxaad arrinta kula macaamili kartaa emayl iyo, haddii wicitaan loo baahdo, diyaarso. Laakiin xaqiiqdii inta badan arrimaha waa la xallin karaa iyada oo aan la wicin.
Sidan oo kale, waxaad si fiican u xakameyn doontaa dheelitirka moobilkaaga oo aad keydin doontaa dhammaadka bisha si aanad ugu baahnayn inaad si joogto ah u buuxiso (gaar ahaan maadaama aad heli karto wicitaanno aan xadidnayn oo aadan ku raaxaysanayn taas).
Adeegso barnaamijyadooda si aad u soo wacdid
Haysashada taleefanka gacanta hor-u-dhaca ah macnaheedu maahan inaadan haysan codsiyo, sida WhatsApp ama Telegram. Sug, maxay adeegsadaan internetka? Dhib ma leh, waxaad ku xidhi kartaa moobilkaaga gurigaaga ama router-ka xafiiska oo aad la wici kartaa iyaga.
Sidan oo kale, ma bixin doontid dheelitirka taleefanka oo waxaad badbaadin doontaa lacag badan. Intaas waxaa sii dheer, wicitaanadaani waxay sii kordhayaan xiriir wanaagsan iyo tayo wanaagsan, markaa waxay noqon doontaa sidii inaad runtii ku wacayso moobilkaaga (laakiin bilaash).
Waxaadna ka tagi doontaa wicitaanada adoo isticmaalaya dheelitirka taleefanka marka aad ka baxeyso guriga ama aad shaqeyneyso oo aad dariiqa taagan tahay adigoon awoodin inaad ku xirto shabakad internet ah.
Kaliya dib u buuxi waxaad u baahan tahay
Mid ka mid ah dhibaatooyinka marka ay timaado dib-u-soo-buuxinta ayaa ah, xitaa haddii aadan ku bixin dheelitirka aad leedahay, marka ay tahay waqtigii aad dib u buuxin lahayd, waad uruursan doontaa. Taasi micneheedu waa maxay? Qiyaas inaad dhigeyso 5 euro oo isku dheelitiran. Iyo afar bilood kadib ma aadan qarash gareynin, ama waxaa kuu hartay 3 euro. Waxaad dhahdaa 5 euro kale dhig, taas oo kaa dhigaysa inaad haysato 8 euro. Laakiin, afar bilood ka dib, waxaad qaadatay 2. Waana inaad mar labaad soo buuxisaa. Waqtiga ka dib, hadaadan u isticmaalin moobilkaaga inaad wacdo, waxaad ku dambeyn doontaa inaad lacag kuugu jirto koontadaada baaqiga ah oo aan dib loo soo celin doonin.
Si kale haddii loo dhigo, waa lacag luntay. Sidaa darteed, sida ugu macquulsan, u qoondee lacagta ugu yar dib u soo celinta. Way ka fiican tahay inaad dib u soo ceshato dhowr jeer intii aad samayn lahayd dib-u-buuxin weyn maxaa yeelay, mustaqbalka fog, waxaad heli doontaa lacag aysan dib u soo celin doonin (xitaa haddii aad qandaraas ama shirkad beddesho).
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Badbaadinta » Tilmaamaha si aad ugu kaydiso bil kasta dib-u-cusbooneysiinta moobiilkaaga
Maalgalinta dahabka ee laxiriira sicir bararka iyo bixinta lacagta